Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pananahana ao amin'ny Revelarnard Singh | Nasruddin Shah: Fiovan'ny Fivavahana avy any Hindou mankany amin'ny Miozolomana amin'ny raharaha taloha teo aloha - Fikarohana momba ny vatana teraka
Mpikaroka: Satwant Pasricha, PhD, Ian Stevenson, MD mpiara-miasa
From: Afaka mihemotra lavitra ny fahafatesana ny volombava, Volana 1; Fikarohana momba ny firaisana, avy amin'i Satwant Pasricha, PhD
Ny fiainana sy ny fahafatesan'i Hardevbaksh Singh
Hardevbaksh Singh dia nipetraka tany Phargana, tanàna iray any amin'ny faritra avaratry Indianina Shahajahanpur. Izy no Hindu ary mpikambana iray tao amin'ny tsangambato Thakur, iray amin'ireo trano ambony na kilasy ambony any India.
Hardevbaksh dia tompon'ny tany ary nanangana omby. Ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy dia nanana elefanta.
Raha tokony ho tamin'ny 70 taona izy, dia nisy ny ady iray rehefa nipoitra ny havany havany lavitra fa ny biby fiompin'i Hardevbaksh dia namadika ny taniny. Na ny zanak'i Hardevbaksh aza niray hevitra tamin'ireo zanak'olo-mpiray tam-po tamin'ity adihevitra ity. Nanafika an'i Hardevbaksh ilay vondrona ary namono azy. Maty tamin'ny March 21, 1961 izy.
Hardevbaksh, Hindoa, Reincarnates ho Silamo
Nasruddin Shah dia teraka herintaona taty aoriana tamin'ny Aprily 1962 ho fianakaviana sahirana Silamo, ao Allahaganj, izay manodidina ny 10 kilometatra na 6 kilaometatra avy any Phargana.
Nandritra ny taonan'ny 2 dia nanomboka niresaka momba ny fiainana taloha iray izay i Thakur i Nasruddin. Nilaza izy fa maty tamin'ny ady izy ary iray tamin'ireo zanany lahy no isan'ny mpamono.
Indray andro, nisy elefanta iray tonga tao Allahagnj izay avy any Phargana ny mpitaingina azy. Nasruddin nilaza fa ny elefanta no azy. Ny tantaran'i Nasruddin no nahafaty azy tamin'ny ady nataon'ny iray tamin'ireo zanany lahy sy ny filazany tamin'ny elefanta ka nahatratra ny vondrom-piarahamonin'i Farrana. Ny vehivavy mpitondratena tao Hardevbaksh Singh dia nahare ny fanambaran'i Nasruddin ary niaraka tamin'ny iray tamin'ireo zanany lahy, dia nandeha nitsena an'i Nasruddin izy.
Nasruddin dia niaiky ny vadiny taloha sy ny fiainany taloha
Rehefa tonga ny fahatongavan'izy ireo dia nampahafantarin'i Nasruddin ny mpitsidika ny reniny sy ny zanany lahy hatramin'ny fahazazany.
Ny fiainana amin'ny fiainana taloha: Nasruddin, miozolomana iray, manana Hindu Mindset
Ankoatra ireo famantarana ireo, Nasruddin dia naneho fihetsiketsehan'ny mpikambana iray tao amin'ny cateaste Hindu Thakur, izay tsy dia mahazatra loatra ho an'ny zazalahy teraka tao amin'ny fianakaviana Silamo malemy. Anisan'izany ireto:
Mandà tsy hihinan-kanina hatramin'ny mbola kely
Mandà tsy hihinana sakafo amin'ny takelaka ampiasain'ny olon-kafa
Mandà tsy hisotro amin'ny veran'ny olon-kafa
Mandà ny fanangonana ny dihin'ny omby amin'ny fampiasana solika ho an'ny fampangatsiahana sy ny fahandroana
Ny fianakavian'i Nasruddin dia nanamarika fa ity fihetsik'i Thakur ity, izay heverin'izy ireo ho "lozabe", dia naharitra mandra-pahatongan'ny 13 hatramin'ny 14 taona. Ankoatra izany, nandà ny handeha niaraka tamin'ny rainy tamin'ny moske izy, tsy nety nilaza ny fivavahana silamo izy ary nandà tsy hiaraka amin'ny fianakaviany amin'ny fifadian-kanina ho an'ny Ramadany. Nasidiny haneso ny fianakaviany mihitsy aza i Nasruddin noho ny fijerena ireo fomba amam-panao Miozolomana, toy ny fifadian-kanina mandritra ny Ramadany.
Tantaran'ny fiainana taloha: Nasruddin's dia manana mari-piterahana izay taratry ny ratra nataon'i Hardevbaksh
Voamarika fa nanana ny fahaterahan'i Nasruddin izay mifanaraka amin'ireo ratra nahazo ny vatan'i Hardevbaksh Singh. (1)
Fiovan'ny fivavahana sy ny mombamomba azy: Hardevbaksh dia Hindoa, saingy teraka indray rehefa lasa Nasruddin ho lasa fianakaviana silamo. Nasruddin dia mbola nifandray tamin'ny finoana hindoa sy ny fiainam-piainany taloha ho Thakur ary amin'ny fomba tsy matotra, dia nitsikera ny fanajan'ny fianakaviany ny fomba amam-panao silamo.
Ny mari-pamantarana avy amin'ny fiainana taloha: Ian Stevenson, MD dia nanoratra betsaka mikasika ny mety ho vokatry ny ratra, toy ny bala na marika, hatramin'ny alàlan'ny fiainana talohan'ny nahaterahana, dia mety hahatonga ny fiterahana amin'ny toerana iray ao amin'ny vatana hafa any aoriana.
1. Pasricha, Satwant, Afaka mihemotra ivelan'ny fahafatesana ve ny saina? Volan'ny 1: Fikarohana momba ny fiterahana amin'ny sehatry ny fanambadiana, Harman Publishing House, New Delhi, 2008, pejy 161-163